म जनजाति विरोधी होइन : प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 27 January, 2021 5:31 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू जनजाति विरोधी नभएको तर आफूलाई जनजाति विरोधीको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार आदिवासी जनजातिहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
ओलीले नेपाल ४ जात ३६ वर्षको मात्रै नभएर १ सय ३६ जातको साझा भएको बताए । आफूले ठाउँअनुसारको व्यवहार नगर्ने भन्दै सबै नेपाली एकसमान भएको ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता खलबल्याउन लागिपरेकाहरुले आफूलाई जनजाती विरोधी भन्दै जात र धर्मका आधारमा राज्य बनाउने कसरत गरेपनि नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार नगरेको उनले बताए । ओलीले राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनता बचाउन जनता सधैँ अग्रमोर्चामा रहेको पनि बताए ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले पशुपतिनाथमा पूजा गर्दा केही बुद्धिजिवी भनिनेहरुको निद हराम भएको बताए । उनले भने, म पशुपति जाँदा केही व्यक्तिहरुको टाउको दुखेको छ । आफ्नो सभ्यातामा किन टाउको दुखाउनु ? पशुपतिनाथ पनि आयातित हो र ?
माधव नेपालले भने- ‘जेसुकै भए पनि यो सरकारको आयु सिद्धियो’
काठमडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली